မေးခွန်း FSX 747
1 months ago 11 တစ်နှစ် #1033 by lpklem
ငါက Air Force One ကို 747-8I အပေါ် kudos add-on, စတင်ခင်မှာကအကောင်းဆုံးအတွက် add-on လေယာဉ်တစ်စင်းကိုငါအုပ်စုနှစ်ဦးမေးခွန်းများကိုသို့ပြေးဖွင့်:
1) ငါပြောင်းပြန်ထိတွေ့ဆက်ဆံပေမယ့်ငါ 1 ပြောင်းပြန်အတွက်တစ်ချိန်ကအတူတူတက် spool မှ throttles အားလုံးမရနိုငျငါ၏အ AF4 အင်ဂျင်တွန်းကန်အားရှိသည်ဖို့တစ် Joystick button ကို (ထိုခလုတ်) assign ဖို့ဘယ်လိုထွက်နေသေးတယ်? ကြောင်းမရှိရင်ငါသာ 10'6ft လေယာဉ်ပြေးလမ်း grrrrr အပေါ်နိမ့်ဆုံး 000% ပြောင်းပြန်တွန်းကန်အားမဟုတ်ဘဲအများကြီးအကူအညီရ
2) ကျွန်မတစ်ဦးနှစ်ဦးမော်နီတာစနစ်အားရှိသည်, အဓိကမော်နီတာပုံမှန်မျက်နှာပြင် VC ကိုစသည်တို့ကိုရှိပါတယ်, ငါအမျိုးမျိုးသောစာရွက်စာတမ်းအမြင်များအသုံးပြုဒုတိယ, ကငါ setup ကိုတခါလေယာဉ်ချွေကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်မ, ငါသည် play setup ကိုတိုင်းဖို့ခဏတစ်ယူ ဒုတိယ screen ကို setup ကိုမကယ်မ။ မဆိုအကြံပြုချက်များတန်ဖိုးထားမည်ဖြစ်သည်။
ဒီ site များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါကကြိုက်တယ်!
1 months ago 11 တစ်နှစ် #1034 by Gh0stRider203
ဝမ်းနည်းစရာ, ငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသော်လည်းအတူမကူညီနိုင်ပါ။ သင်သည်မည်သည့်နှင့်အတူ check လုပ်ထားခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ဖူး FSX FB ပေါ်မှာအဖွဲ့များ? ( .... သူတို့တစ်တွေနွားထီးတကောင်အပေါ် tits ကဲ့သို့အသုံးဝင်သောအကြောင်းကိုင်အခြားသူတွေအပေါ် ...... အရှိဆုံးသောအရာတို့ကိုအပေါ်) ငါတော်တော်များများအတွက်ရယ်ကိုသိကြပြီးတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်ပုံရသည်။
1 months ago 11 တစ်နှစ် #1035 by DRCW
ဟေးသည် FSX matrix ကို assign ဝမ်းမြောက်သောစိတ်တုတ်များနှင့်အချို့သောလေယာဉ်ဂီယာများအတွက်မဟုတ်ဘဲအနိမ့်အဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်သည်အောက်ပါကွိုးစားနိုင် ... ခလုတ်ကိုနှင့်အဓိက Assign သို့ သွား. , သင်တို့ကို F2 (အဆိုပါကို Reverse key ကို) ထိုအပိုင်း Highlight, သင်၏ Joystick ပေါ်မှခလုတ် key ကိုတွန်းတွေ့မြင်ရှိရာအပိုင်းဆင်းဝေ့။ ဒါကြောင့်ဓာတ်ပြုပြီးနှင့်သင်ပြောင်းလဲကြည့်ရှုလျှင်, ခလုတ်ခလုတ်ကိုပြောင်းပြန်သော့ချက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းပါစေ
1 months ago 11 တစ်နှစ် #1036 by lpklem
ဒါကငါပြောင်းပြန်တွန်းကန်အား 10% ထက်ကျော်လွန်ဘယ်တော့မှ max မှပြန်လုပ်သတ်မှတ်ထားရင်တောင်ပြောင်းပြန်အတွက်ပဲ reverse ဖျက်သိမ်းနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့် throttles နေချိန်မှာငါ Joystick သုံးပြီးတွန်းကန်အားကိုတိုးမြှင့်သည့်တစ်မိနစ်မဟုတ်အတိအကျ, ထိန်းချုပ်မှုထိုးသို့သော် reverse ဖို့ Joystick button ကိုတာဝန်ပေးပုံ အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့တစ်ဆင်းသက် runout အပေါ်ရှာဖွေနေ။ အဆိုပါ input ကိုယျတျောသညျအဘို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါကတန်ဖိုးထား !!!!
1 months ago 11 တစ်နှစ် #1037 by DRCW
yeah, သင် button ကိုမျိုးစုံကို Push ကြိုးစားခဲ့ကြပြီလော ဒါဟာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ့ Joystick အပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော button ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုံအတွေး, ဒါပေမယ့် FSX ဤဒေသရှိကန့်သတ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် ..